Tamarta korantada ee Isbaanishka waxay soosaaraysay iftiin muddo qarni ka badan | Cusbooneysiinta Cagaaran
Dalkeennu wuxuu leeyahay awood koronto oo weyn, oo la soo saaray intii lagu jiray muddo ka badan 100 sano. Tan awgeed, hadda waxaa jira nidaam ballaaran oo wax soo saar koronto dhaliya oo si heer sare ah u shaqeeya.
Tamarta dib loo cusboonaysiin karo ee ka faa'iideystay Spain, quwadda biyaha Waa tiknoolajiyada ugu adag ee la adkeeyay uguna bislaaday, adeegsiga ereyga iyo jiritaanka biyo xireenno badan.
1.1 Hoos u dhac
2 Horumarinta farsamada
Waxaa jira laba nooc oo looga faa'iideysto koronto-dhalinta: tan hore, dhirta biyaha ee qabta qayb ka mid ah qulqulka qulqulka webiga dhexdiisa waxayna u horseeddaa geedka inuu noqdo marawaxado dabadeedna waxay ku noqdeen webiga.
Caadi ahaan, waxay isticmaalaan kala duwanaansho awood hooseeya (caadi ahaan wax ka yar 5 MW) waxayna xisaabtamaan 75% suuqa. Waxaa ka mid ah "kanaalka waraabka dhexe", ee isticmaala sinnaan la'aanta biyaha kanaallada waraabka si loo soo saaro koronto.
Dhirta biyo xidheenka waa kuwa dhisida biyo xireenka ama adeegsiga midka jira, nidaaminaya socodka. Badanaa waxay leeyihiin heerar awood ka weyn 5 MW waxayna metelaan ilaa 20% suuqa Spain. Kuwaas dhexdooda waxaa ku yaal matoorrada ama dhirta dib loo rogi karo, dhirta, marka lagu daro dhalinta tamarta (habka marawaxadaha), waxay leeyihiin awood ay biyo ugu kaydin karaan kaydka ama kaydka iyagoo isticmaalaya koronto (habka bamgareynta).
Isku soo wada duuboo, dalka Isbaanishka waxaa jira wadar dhan awooda kaydka oo ah 55.000 hm3, taas oo 40% ka mid ah awoodaasi u dhiganta kaydadka korontada laga dhaliyo, mid ka mid ah saamiga ugu sarreeya Yurub iyo adduunka.
Taariikh ahaan, isbeddelka tamarta korantada ee Isbaanishka ayaa sii kordheysay, sanadihii la soo dhaafay waxay la kulantay hoos u dhac weyn oo ku yimid kaalintii ay ku lahayd wadarta wax soo saarka korontada, tan iyo markii tamarta kale ee dib loo cusboonaysiin karo lagu soo saaray isku dhafka tamarta.
In kastoo, ay wali sii ahaato mid ka mid ah kuwa ugu cusboonaysiinta cusboonaysiinta oo ay weheliso awoodda dabaysha. Hydropower waxay leedahay awood lagu rakibay wadankeena oo ah 17.792 MW, tani waxay u dhigantaa 19,5% wadarta guud, awooda kaliya waxaa dhaaftay wareegyada gaaska la isku daray in, wadar ahaan 27.200 MW, ay tahay teknolojiyaddii ugu horreysay ee koronto lagu rakibay (24,8% wadarta guud), taa bedelkeed, tamarta dabaysha, waxay leedahay 23.002 MW oo awood ah (22,3%).
Sanadkii 2014, tabarucaadka tamarta korontada ee wax soo saarka korontada dalka wuxuu matalayay 15,5%, wadar ahaan 35.860 GWh, tiradaasi waxay muujineysaa koror 5,6% sanadkii hore. In kasta oo wanaagsan dhaqanka korontada, wuxuu ahaa tiknoolajiyad afaraad ee wax soo saar, kana dambeysa nukliyeerka (22%), dabaysha (20,3% 9 iyo dhuxusha (16,5%).
Mustaqbalka dhow, waxaa la filayaa in tikniyoolajiyaddan ay sii socon doonto inay koro sanad walba celcelis ahaan inta udhaxeysa 40 illaa 60 MW, tan iyo markii laga dhalan karo korantada korantada iyadoo ay suuragal tahay dhaqaale ahaan waara, waa in ka badan 1 GW.
Catalonia, Galicia iyo Castilla y León waa bulshooyin ismaamula oo leh kuwa ugu sareeya awood lagu rakibay qaybta tamarta korontada, maadaama ay yihiin meelaha ugu badan ee ay ku urursan yihiin ilaha biyaha gudaha Spain
Talaabo talaabo, horumarka tikniyoolajiyadda ayaa horseeday tamar yar oo hayd-hidde ah oo leh kharash aad u tartan badan suuqa korontada, in kastoo kuwani ku kala duwan yihiin nooca dhirta iyo ficilka la qaadayo. Warshad koronto waxaa loo tixgeliyaa mini-hydro haddii ay leedahay awood rakib ah oo ka yar 10 MW waxayna noqon kartaa biyo socda ama biyo taagan.
Waqtigan xaadirka ah, microturbines Haydarooliga waxaa lagu soo saarayaa awoodo ka hooseeya kuwaas 10 kW, kuwani waa kuwo aad waxtar u leh in laga faa'iideysto xoogga fir fircoon ee webiyada oo laga dhaliyo koronto meelaha go'doonsan. Marawaxada ayaa si toos ah u soo saarta koronto markii lagu jiro talantaalli ah umana baahna biyo dhacaya, kaabayaal dheeri ah ama kharashka dayactirka oo sareeya.
Maanta, horumarinta qaybta biyaha ee Isbaanishka waxaa looga dan leeyahay in lagu gaaro hufnaan ballaaran, si loo wanaajiyo waxqabadka xarumaha hadda jira. Soo-jeedinta waxaa loo diraa dhaqan celinta, casriyeynta, hagaajinta ama ballaarinta dhirta horey loo rakibay.
Isbaanishku hada wuxuu leeyahay ilaa 800 oo dhirta korontada laga dhaliyo ah, oo cabirkeedu aad u kala duwan yahay. Waxaa jira 20 dhir oo ka badan 200 MW, kuwaas oo marka la isu geeyo u dhigma 50% wadarta tamarta korontada laga dhaliyo. Dhinaca kale ee jira, waxaa jira daraasiin biyo xireenno yaryar ah oo leh awoodo aan ka yarayn 20 MW, oo laga qaybiyey dalka Spain oo dhan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Tamarta Korontada » Tamarta korantada ee Spain